Sobornaya ingwe - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguNelly
Igumbi elinobunewunewu elihonjiswe kumbindi weKremenchug ecaleni kwesitrato saseSobornaya apho kukho iivenkile ezilungileyo, iiresityu, iikhefi. Umthombo womculo kunye nokukhanya, ipaki ephakathi ziimitha ezingama-30 ukusuka kwindlu. Ukuya emarikeni imizuzu emi-3.
Amafulethi ayenziwe ngumyili, iifoto zabo zinokufumaneka kwiimagazini ezininzi kunye neekhathalogu. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo ezitsha (i-air conditioning, i-TV ye-flat-screen), izitya ezintle, iilinen (umqhaphu), izinto zokulala.
Indawo entle kumgangatho wesibini, ekufuphi nomthombo, kwisitrato esikhulu, kumgangatho wokuqala ohlala ezona cafes ezilungileyo, iivenkile zokutyela kunye neevenkile.
4.88 · Izimvo eziyi-18
Iziko lesixeko, zonke iikhefi, iivenkile zokutyela, iivenkile ezisesitratweni
Ngalo lonke ixesha ndinxibelelana
Iilwimi: English, עברית, Русский, Українська
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kremenchuk